lundi, 11 septembre 2017 20:32
Fiangonana EKAR Toamasina: Maty tampoka ny Pretra Ralibosolo Ignace Onesiphore
Nodimandry tampoka, teo amin’ny faha-52 taona, omaly alahady 10 septambra tokony ho tamin’ny 05ora hariva ny Pretra Ralibosolo Ignace Onesiphore. Mbola nitarika fotoam-pivavahana tao amin’ny hopitaly be ity pretra ity ny maraina, tsy narary tsy marin-koditra, nony tolakandro anefa dia niakatra tampoka ny tahan’ny siramamy tao aminy amin’ny maha-diabetika azy, ka niteraka ny fiakaran’ny tosi-drany ary nitarika ny fahafatesany izao.
Teraka ny 18 febroary 1965 tao Anivorano Atsinanana i Ralibosolo Ignace Onesiphore; ny 26 desambra 1984 izy no voahositra ho Diakra ary ny 13 aogositra 1994 izy no nohamasinina ho Pretra tao Anivorano Atsinanana Brickaville.
Raha ny fandaharam-potoanan’ireo relijiozy namany dia ny talata 12 septambra izao no hapetraka ao anatin’ny fasan’ireo pretra ho an’ny Diosezin’i Toamasina ny nofo mangatsiakany, aorian’ny fotoam-pivavahana anaovana veloma farany azy.
lundi, 11 septembre 2017 16:20
Fantatrao ve: Fandovana sy ny Didim-pananana
Isaorana hatrany ireo namana mpahay Lalàna manome antsika fanazavana momba ny zava-manahirana antsika andavan'andro.
Araka ny Andininy voalohany ao amin'ny Lalàna 68-012 tamin'ny 04/07/1968, Ny Fandovàna ("succession") dia famindràna ny fanànana navelan'ny maty; na izany fanànana mivaingana ("biens"), na izany Zo ("droits"), na izany ...adidy("obligations").
Izany hoe, VOARARAN'NY LALàNA NY ...MANDOVA OLONA ..VELONA!
Ny Fandovàna dia dia misy karazany 2:
1-Fandovàna tsy misy Didim-panànana ("succession sans testament")
2- Fandovàna vokatry ny Didim-panànana ("succession testamentaire")
lundi, 11 septembre 2017 10:16
Morondava: Mpanjono miisa 72 nozaraina karatra matihanina
Nomena karatra ny mpanjono, nasiana laharana ny lakana. Nanao dingana matihanina kokoa ny jono aty Menabe. Niisa 72 ireo mpanjono nahazo karatra ny faran’ny herinandro lasa teo, ka vehivavy ny 09 tamin’ireo. Nanome tanana ny Faritra naka sary maimaimpoana ireo mpanjono, hapetaka amin’ny karatra.
lundi, 11 septembre 2017 09:25
Pont de Lohariandava: On fait croire construire du neuf avec du vieux
Le président de la République Hery Rajaonarimampianina a inauguré un mois de cela la réhabilitation d’une portion du chemin de fer Tananarive-Côte Est (TCE), détruite par le passage du cyclone Enawo. Ces dégâts cycloniques ont isolés les populations de Lohariandava, Razanaka, Fanasana et Anivorano Est qui dépendent totalement de cette ligne TCE.
Il se trouve que le pont n'était pas construit à neuf mais c'est le pont de chemin de fer à Antohamadinika qui a été démonté pour être installé à Lohariandava, et inauguré comme du pont neuf.
lundi, 11 septembre 2017 09:05
Antaninarenina: Mpianatra ESTI mampiranty ny vokam-pikarohana
Mpianatra miisa 49 izay ao amin’ny taona voalohany ao amin’ny ESTI na ny Ecole Supérieure des Technologies de l’Information à Madagascar no nampiseho ireo voka-pikarohana nataony, izay notontosaina tao amin’ny CCIA Antaninarenina ny sabotsy 09 septambra lasa teo.
Mirona kokoa any amin’ny ilay antsoina hoe Projets numériques ny fikarohana nataon’ireto mpianatra izay hivoaka ho ingenieur sy teknisianina ambony ireto.
Nisy araka izany ny fanolorana loka ho an’ireo ekipa telo mendrika voalohany.
Maro ireo orin’asa lehibe manohana ity fianarana ity ary anisan’izany ny TELMA izay anisan’ny nanolotra loka maro ho an’ireo mpianatra ireo.
lundi, 11 septembre 2017 08:55
Fanabeazana: Mampianatra an’arivony hozaraina “contrat de travail”
Mpampianatra aman-jatony isaky ny distrika no hampiakarina any Antananarivo fa hozaraina “contrat de travail” amin’ny 24 septambra ho avy izao. Ho an’ny distrikan’i Marolambo manokana dia fiara miisa 5 no hitondra mpampianatra miisa 109, izay hihainga avy eto Mahanoro.
Tamin’ireo andiany teo aloha, nandraisana mpampianatra FRAM ho mpampianatra raikitra dia nitety Cisco na fari-piadidiam-pampianarana ny tomponandraikitra avy eo anivon’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena nizara “contrat de travail”.
Mampametra-panontaniana ity fizarana “contrat de travail” faobe hatao ao Antananarivo ity, sa manao propagandy ho an'ny HVM ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena ?
lundi, 11 septembre 2017 08:41
Sambava: Mpiasa iray may tao anaty trano fitahirizana entana
Nirehitra ny trano fitahirizana entana iray teto Antanifotsy Voalohany, Sambava omaly alahady 10 septambra tamin’ny 3ora maraina teo. Tampoka ny afo, hoy Atoa Rostand izay tompon’ity tranombarotra ity ary hatramin’izao dia “tsy mbola fantatray ny tena nipoirany”.
Tsy misy tafavoaka ny entam-barotra fa nandritra io fahamaizana io dia lehilahy iray mpanampy no natory tao anatiny ary tratry ny afo tao, saingy tafavoaka. Tsaboina eny amin'ny hopitalibe izy amin'izao.
Mangataka amin’ny tompon’andraikitra izy ireo mba hanokatra fanadihadiana momba ity haintrano ity.